समाज Archives - News20 Media
आमाको काजकिरिया छोडेर आएका कर्णले दुनियाँ रुवाए । हेर्नुहोस(भिडियो सहित)
July 18, 2021 July 18, 2021 N20LeaveaComment on आमाको काजकिरिया छोडेर आएका कर्णले दुनियाँ रुवाए । हेर्नुहोस(भिडियो सहित)
काठमाडौं । नेपालको चर्चित रियालिटी सो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ सिजन ३ ले निकै राम्रो प्रतिभा भएको कलाकारहरु छनौट गर्दै उत्कृष्ट १० को प्रतिस्पर्धा गराएको छ । जसमध्ये एउटा एस्तो आवाज थियो जुन आवाज निकै पिडामा थियो र त्यही आवाज संगीतसंग साईनो गास्दै जादु बन्न पुग्यो । त्यो आवाज हो कर्णराज गिरिको उनी आफ्नो ममतामयी […]
साउन १ देखि आईएमईआई दर्ता अनिवार्य, नत्र चल्ने छैनन् मोबाइल ! आईएमईआई नम्बर कसरी दर्ता गर्ने ?
July 6, 2021 July 6, 2021 N20LeaveaComment on साउन १ देखि आईएमईआई दर्ता अनिवार्य, नत्र चल्ने छैनन् मोबाइल ! आईएमईआई नम्बर कसरी दर्ता गर्ने ?
असार, काठमाडौं । साउन १ गते पछाडि अवैध रुपमा नेपाल भित्रिएका वा विदेशबाट उपहारमा प्राप्त मोबाइलहरु आईएमईआई नम्बर दर्ता नगरेसम्म नचल्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । व्यवसायीहरूले आयात गरेका मोबाइल फोनको आईएमईआई नम्बर उनीहरूले नै दर्ता गरिदिन्छन् । तर विदेशमा रहेका आफन्त वा साथीभाइले उतै किनेर नेपाल पठाइदिएका मोबाइलहरुको हकमा भने व्यक्ति स्वयंले आईएमईआई […]
एकाएक सेनाले दियो प्रहरिलाई ३०० सय थान हतियार, अबको के होला? सबैलाई चासो ।
July 5, 2021 N20LeaveaComment on एकाएक सेनाले दियो प्रहरिलाई ३०० सय थान हतियार, अबको के होला? सबैलाई चासो ।
एकाएक सेनाले दियो प्रहरिलाई ३०० सय थान हतियार, अबको के होला? सबैलाई चासो । काठमाडौ । प्रधान सेनापति महारथी पूर्णचन्द्र थापाले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) शैलेश थापा क्षेत्रीलाई हतियार हस्तान्तरण गरेका छन । सेनापति थापाले ३०० नाल राइफल, एम्युनिशन र सम्बद्ध सामग्रीहरु हस्तान्तरण गरेका हुन् । यसअघि २०७७ साउन १४ गते पनि सेनाले सशस्त्र प्रहरी बललाई […]
अपहरणमा परेकी सुजिताको लास भेटियो। हत्याराको खोजी तिब्र।
July 5, 2021 N20LeaveaComment on अपहरणमा परेकी सुजिताको लास भेटियो। हत्याराको खोजी तिब्र।
चितवन । केहि दिन अगाडी किड्न्याप भएकी भनिएकी राप्ती नगरपालिका वडा नं. ३ की सुजिता भण्डारीको लास फेला परेको छ । वडा नं. ३ को धमिलीमा रहेको बम्हस्थानि सामुुदायिक वनमा भण्डारीको लास फेला परेको हो । उनका परिवारका सदस्यले लासको पहिचान गरेपछि भण्डारीको लास रहेको भन्ने प्रमाण भएको हो । प्रहरीले त्यहा लास रहेको जानकारी […]
रबि लामिछाने दलाल कि समाजसेवी? सबैलाई चुनौती दिदै लेखे स्टाट्स।
July 5, 2021 N20LeaveaComment on रबि लामिछाने दलाल कि समाजसेवी? सबैलाई चुनौती दिदै लेखे स्टाट्स।
काठमाडौ । सँचारकर्मी रबि लामिछानेले आफ्ना बिरोधीहरुलाई जवाफ दिएका छन् । उनले भनेका छन् -म र मेरो टिमले यी कामहरु कसैले कर लगाएर गरेका होइनौं, आफ्नै रहर र ईच्छाले गरेका हौं। यसमा शंका गर्ने, प्रश्न गर्ने मात्र होइन पत्यार लागे/ नलागे साफ गाली गर्न समेत पाइन्छ। बिरोधको आवाज सुन्न नसक्ने मान्छे म होइन। अझै भन्नु […]
नेपालमा टिकटक एकाउन्ट धमाधम बन्द हुँदै ! सहि वा गलत?
July 4, 2021 N20LeaveaComment on नेपालमा टिकटक एकाउन्ट धमाधम बन्द हुँदै ! सहि वा गलत?
काठमाडौ । १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरुका झण्डै ७३ लाख एकाउन्ट टिकटकले बन्द गरिदिएको छ । यो वर्ष सन् २०२१ को पहिलो त्रैमासिकमा टिकटकले बालबालिकाको भनेर आशंका गरिएको भनिएका लाखौँ एकाउन्ट बन्द गरिदिएको हो । यो संख्या टिकटकका विश्वव्यापी प्रयोगकर्ताको संख्याको १ प्रतिशत मात्रै हो । ट्विटरको नियमानुसार १३ वर्ष र सोभन्दा माथिको उमेरका व्यक्तिले […]
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बधाईको ओईरो। अन्य मन्त्रालय शुन्य।
July 4, 2021 N20LeaveaComment on गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बधाईको ओईरो। अन्य मन्त्रालय शुन्य।
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीलाई यतिबेला कार्यकर्ता भेटको चटारो भैइरहेको छ । उनको कार्यालयमा दिनहु हातमा खादा लिएर बधाई दिन तथा ज्ञापनपत्र लिएर भेट्न आउने हरुको भिड हुन्छ । वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेपालीलाई अझैसम्म बधाइ थाप्न भ्याइनभ्याइ छ । तर अन्य मन्त्रालय मन्त्री बिहिन छन । सबै काम ठप्प छ, […]
कपनको रहस्यमय घट्नाले ठूलो रुप लियो। गणेशलाई डाक्टरले नै झुण्डाएर मारेको आफन्तको दावी।
July 4, 2021 N20LeaveaComment on कपनको रहस्यमय घट्नाले ठूलो रुप लियो। गणेशलाई डाक्टरले नै झुण्डाएर मारेको आफन्तको दावी।
काठमाडौ । कपनमा घरेलु कामदारका रुपमा बसेर काम गर्ने एक युवकको रहस्यमय निधन भएपछि अहिले उनका परिवारका सदस्यले मालिकको परिवारले माथि प्रश्न उठाएका छन् । युवकको बहिनी भन्छिन्, ५० मिनट एम्बुलेन्स किन घरमा राखियो र यो आफै देह त्या ग गरेको होइन । घरभेटीको यो घटनामा हात छ । मृतकको दिदी निकै आ क्रो शि […]
अत्यन्तै दुख:द खबर ,पहिरोले ४ ओटा ट्रक पु’रिए ; २ जनाको मृ’त्यु
July 4, 2021 N20LeaveaComment on अत्यन्तै दुख:द खबर ,पहिरोले ४ ओटा ट्रक पु’रिए ; २ जनाको मृ’त्यु
धादिङ / अविरल वर्षापछि आएको पहिरोमा ट्रक पुरिदा दुई जनाको मृ ’त्यु भएको छ । पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका- १० मा खसेको पहिराले चारवटा सवारी साधनमा क्ष’ति पुगेको हो । पहिराले क्ष’ति पुर्‍याएको चारमध्ये ना ८ ख ४५४० ट्रक र ना ७ ख ३२० नम्बरको कण्टेनरको पहिचान खुलेको ईलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीले जनाएको […]
रुपा सुनारको सबैलाई झस्काइदिने वास्तविकता यस्तो छ, दलित नभएको खुलासा
July 2, 2021 July 2, 2021 N20LeaveaComment on रुपा सुनारको सबैलाई झस्काइदिने वास्तविकता यस्तो छ, दलित नभएको खुलासा
असार १८, काठमाण्डौ नेपालमा बेलाबेलामा चर्चाम आइरहने बिषय हो दलित र ब्राहम्ण को बिबाद । यतिबेला यहि बिषयले गर्दा सामाजिक सञ्जाल तातेको छ ।रुपा सुनारका बिषयमा फरकफरक समाचार आइरहेका छन्। उनी करोडौको कारोबारमा सलंग्न भइरहेको समाचार आइरहेका बेलामा समाचार साचो वा झुटो भन्ने ठोस आधार फेला पार्न सकिएको छैन । तल्लो जाती र माथील्लो जातको […]